Indlwana ka-Maud, e-Zennor, e-St Ives - I-Airbnb
Indlwana ka-Maud, e-Zennor, e-St Ives
Yonke le ndlwana yekhulu le-19 iyatholakala ukuze iqashwe. Isanda kulungiswa ngokubukwa kolwandle, isibhakabhaka namaphethini asendulo. Ibiyelwe ekhoneni elivela esontweni le-Zennor elinokuqoshwa okuvela kumakadebona odumile we-Mermaid of Zennor.
Leli dolobhana elithulile, elibukekayo linokufinyelela okuqondile ku-SW Coastal path, uhambo lwemizuzu engu-2 oluya e-Tinners Arms, uhambo lwemizuzu engu-5 oluya e-Gurnards Head.
I-St Ives - imizuzu engu-10 ngemoto noma uthathe ibhasi usuka edolobhaneni.
Ama-shower amakhulu anokukhanya nomoya, anamandla, umshini wokushisa izinkuni, ingadi ngaphambili nangemuva.
Indlwana ivuleke kakhulu futhi inokukhanya kwendawo yaphansi ye-okhi, amasilingi aphakeme nokubukeka okuhle.
Kukhona ikhishi/i-diner, i-larder/izinsiza, ikamelo elikhulu lokuhlala nehholo esitezi esiphansi, amakamelo okulala angu-2 anombhede omkhulu olala abantu ababili, elilodwa elinendawo yokulala, ikamelo lokulala elinombhede 'okaputeni' negumbi lokugezela lomndeni esitezi sokuqala.
Ingadi ingaphambili & ingemuva.
I-TV engu- 26" ene-I-Netflix
I-Zennor yidolobhana elithulile endaweni yobuhle bemvelo obuvelele. Izungezwe amagquma, amawa nolwandle lwe-Atlantic. Kusenemizila yasendulo ezungeze amasimu amancane futhi amapulazi endawo anobisi lendabuko nezinkomo ezifuya ngaphandle. Kukhona isonto elihle lekhulu le-12 kanye ne-pub endala yendabuko enikeza ukudla okumnandi. Eduzane yi-Gurnards Head Hotel enikeza ukudla okuhle kakhulu futhi iye yanqoba imiklomelo eminingi.
Kuyindawo enhle yokuhamba ngezinyawo futhi ubuhle bendawo kumnandi impela.